ရေမွန်တစ်ယောက် လက်တွဲဖော် အချစ်သစ်တွေ့သွားပြီလား ? - Cele GabarCele Gabar
ရေမွန်တစ်ယောက် လက်တွဲဖော် အချစ်သစ်တွေ့သွားပြီလား ?
Published: May 15, 201912:42 pm
လူငယ်တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Idiots Band ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ Band တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Idiots Band ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော် တေးသံရှင်ရေမွှန်ဟာလည်း နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသည်းစွဲဖြစ်နေသလို ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေလည်း ကြွေနေရတဲ့ အဆိုကျော်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်တွေပြင်းထန်ပေါက်ကွဲ စေတဲ့ ခမ်ကြမ်းကြမ်း သီချင်း ပုံစံတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရူးသွပ်စွာအားပေးခဲ့ကြရသလို ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက်သီချင်းလေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရင်ကိုထိစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျိုမေတို့ရဲ့အသည်းစွဲရေမွန်ကတော့ မကြာသေးမီကမှ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရေမွန်ရဲ့ အချစ်ရေး သတင်းတွေဟာ ငြိမ်သွားခဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်တော် ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရင်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ရေမွန်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ My Day ကနေ လက်တွဲထားတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ် ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ချစ်သူသစ်လို့ ယူဆရလို့ ပရိသတ်တွေအားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ တပြိုင်ထဲမှာပဲ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကလည်း ရေမွန်ရည်းစားသစ်ရသွားပြီလားလို့ အသည်းကွဲနေကြတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ် ။ ကဲ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရော ရေမွန်ရည်းစားသစ်ရနေပြီလို့ထင်လား ဖြေပေးခဲ့ပါဦး ။
Source : Wai Mon Oo
ရမှေနျတဈယောကျ လကျတှဲဖျော အခဈြသဈတှသှေ့ားပွီလား ?
လူငယျတှနေဲ့ပဲ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Idiots Band ကတော့ ဆယျကြျောသကျ လူငယျပရိသတျတှကွေားမှာ ဒိတျဒိတျကွဲ အောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ Band တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ Idiots Band ရဲ့ ပငျတိုငျအဆိုတျော တေးသံရှငျရမှေနျဟာလညျး နှုတျခမျးနီမလေးတှေ အသညျးစှဲဖွဈနသေလို ယောကျြားလေး ပရိသတျတှလေညျး ကွှနေရေတဲ့ အဆိုကြျောတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခံစားခကျြတှပွေငျးထနျပေါကျကှဲ စတေဲ့ ခမျကွမျးကွမျး သီခငျြး ပုံစံတှနေဲ့ ပရိသတျတှေ ရူးသှပျစှာအားပေးခဲ့ကွရသလို ဆယျကြျောသကျတှရေဲ့နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ခံစားခကျြသီခငျြးလေးတှကေလညျး ပရိသတျတှရေငျကိုထိစခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပြိုမတေို့ရဲ့အသညျးစှဲရမှေနျကတော့ မကွာသေးမီကမှ ခဈြသူကောငျမလေးနဲ့ လမျးခှဲပွတျစဲခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။
ခဈြသူကောငျမလေးနဲ့ လမျးခှဲပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ရမှေနျရဲ့ အခဈြရေး သတငျးတှဟော ငွိမျသှားခဲ့ပွီး တဈကိုယျတျော ဘဝကိုဖွတျသနျးရငျး အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျနခေဲ့တာပါ ။ လတျတလောမှာတော့ ရမှေနျတဈယောကျ သူ့ရဲ့ My Day ကနေ လကျတှဲထားတဲ့ ပုံလေးတဈပုံကို တငျခဲ့ပါတယျ ။ မိနျးကလေး တဈယောကျရဲ့လကျဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ခဈြသူသဈလို့ ယူဆရလို့ ပရိသတျတှအေားလုံးက စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ တပွိုငျထဲမှာပဲ မိနျးကလေး ပရိသတျတှကေလညျး ရမှေနျရညျးစားသဈရသှားပွီလားလို့ အသညျးကှဲနကွေတာကို တှမွေ့ငျရပါတယျ ။ ကဲ CeleGabar ပရိသတျကွီးရော ရမှေနျရညျးစားသဈရနပွေီလို့ထငျလား ဖွပေေးခဲ့ပါဦး ။
Previous Previous post: လက်ဦးဆရာအဖြစ် သူထူးစံကို မင်းသားဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့စိတ်အနာဆုံးပဲလို့ဆိုလာတဲ့ စတန့်အက်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကမ္ဘာရှား
Next Next post: “မသေသရွေ့ အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ဦးပေါ်လေး “
သမ္မတ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်း သက်သာခွင့်ကြောင့် ဘဝသစ်ပြန်စခွင့်ရတော့မယ့် မိုးအောင်ရင်
Published: May 7, 20199:24 am Updated: May 8, 201910:35 am
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့်ပစ်လိုက်ပြီး သူမဆီရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေကို ပြန်မပေးဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ ခိုင်နှင်ေးဝ
Published: May 18, 20195:55 pm
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထပ်မံပြသမဲ့ မုန်းစွဲအတွက် ပရိသတ်တွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့ မုန်းစွဲ အဖွဲ့သားများ
Published: May 11, 201912:33 pm
ဘယ်တုန်းက ဘတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ Surprise လုပ်ပေးတာလဲ လို့ ချစ်စရာကောင်းအောင် ရစ်လိုက်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ချစ်ဇနီးလေးဇင်သဲနိုင်
Published: April 27, 20191:45 pm Updated: April 30, 20191:34 pm
” ပွဲစီစဉ်သူတွေကို မစော်ကားဖို့ပြောလာတဲ့ သျှန်ထွန်း (မြန်မာစာ)”
Published: April 19, 201911:54 am Updated: 10:33 pm
မန္တလေးမှာ ဒုတိယအကြိမ်မွေးနေ့ Show ပြုလုပ်မဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
Published: May 11, 20194:55 pm
စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း ရိုမန့်တစ်ဒရမ်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ကို ရိုက်ကူးဖို့လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော လီမင်ဟို
Published: May 8, 20192:22 pm Updated: 2:23 pm
ဖြူဖြူချောချော အင်္ဂလန်သူ Game of Thrones မင်းသမီး Sophie Turner ကို အပိုင်သိမ်းယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်Joe Jonas
Published: May 2, 20194:18 pm Updated: May 3, 201912:18 pm
ဖျာပုံမှာ အလှူ သွားလုပ်ရင်း ပရိသတ်တွေကို အဆို၊အကတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ပရဟိမင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေ
Published: May 4, 20192:06 pm Updated: 2:59 pm
ပရိသတ်တွေစက်ဆုပ်ကြတဲ့ ဗီလိန်လူကြမ်းဆိုပေမဲ့ လူသားဆန်ပြီးနှလုံးသားလှသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သူ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ထင်ကျော်
Published: May 17, 20196:56 pm Updated: May 20, 201911:43 am